Mujaahidiinta Shaam oo dagaallo adag ka wada magaalada Caasimadda ah ee Dimishiq. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Mar 20, 2017 245 0
Dagaallo adag oo aadna u xoogan ayaa tan iyo shalay waxay ka soconayaan magaalada Dimshiq ee caasimadda dalka Suuriya, kuwaas oo u dhexeeya ciidamada Mujaahidiinta Suuriya iyo kuwa Nidaamka Mujrimka Bashaar Al-Asad.
Dagaalkan oo ay horboodeyso hay’adda Taxriiru-Shaam ayna ka qeyb galayaan jamaacaad kale oo ka howlgala gobolka Dimishiq, ayaa xoogiisa waxa uu ka soconayaa xaafadda Jowbar ee magaalada Dimishiq.
Dagaalka waxaa lagu daah furay labo camaliyadood oo Nafhurnimo ah oo ay fuliyeen Muhaajir iyo Ansaari katirsan hay’adda Taxriiru-Shaam, waxaana markaas kadib xigay xoog ku gal ay sameeyeen ciidamada Inqimaasiyiinta Mujaahidiinta.
Dagaalka oo ah mid weli socoda ayay Mujaahidiintu saacadihii ugu horeeyay waxay kasoo hooyeen guulo la taaban karo, iyagoona la wareegay goobo istiraatiji ah oo markii hore ay ku sugnaayeen Nusayriyada.
Meelaha ay Mujaahidiintu la wareegeen waxaa kamid ah xarunta shirkadda Korontada iyo xaafadda Al-macaamil oo dhamaantooda katirsan magaalada Dimishiq.
Barta telegramka ee hay’adda Taxriiru-Shaam waxaa lagu baahiyay sawirada istish-haadiyiinta, iyo maydadka ciidamada Nusayriyada iyo sidoo kale qanaa’im ay Mujaahidiintu gacanta ku dhigeen.